China Curtain Video Curtain, Curtain lehibe Làlam-pandrefesana, Fampisehoana Mijoro Media, Mpanamboatra Fampandrahana Curtain Led
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Taratra Video,Ny efijery fanamainty lehibe,Media Led Grid Display,Fampisehoana Led Curtain Custom,,
Home > Products > Transparent LED fampisehoana > Fampisehoana savoka LED ivelany
Fampisehoana savoka LED ivelany
Ny vokatra avy amin'ny Fampisehoana savoka LED ivelany , mpanofana manokana avy any Shina, Taratra Video , Ny efijery fanamainty lehibe mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Media Led Grid Display R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
P25 ny efijery nitarika horonantsary efijery nihetsika
Ny efijery P25-31 Outdoor Curtain
Ny efijery LED anatiny
P50 ety ivelany no nitarika ny fampirantiana kofehy ivelany
P15.6 Fampisehoana Mesh Curtain LED ho an'ny fananganana
P16 Outdoor Grille Curtain LED fampisehoana
LED Video Media Facades- Manaparitaka ireo Horizons Of Advertising Rehefa mivezivezy haingana ny izao tontolo izao dia mila teknolojia izay afaka mitazona ny olona havaozina sy hialamboly. Fampisehoana Outfa tsy miovaova sy Led Media Facade Emc-b, izay mampientanentana ny olona sy manolotra azy ireo fialamboly,...
Dikan-tsarimihetsika LED Video lehibe lehibe misy rindrina befefit Of Advertising ny efijery fitaterana lakile malalaka avy any ivelany dia mety ho mahavariana, indrindra amin'ny andro sy ny alina. Ny vahoaka afaka mahita be Rindran'ny horonantsary mivelatra ivelany ivelany avy amin'ny halavirana lavitra,...
Nahoana no nitarika ny harato ivelan'ny trano maneho afaka mitarika ny lamaody ny ivelan'ny trano haino aman-jery? Ny Outdoor Led Mesh ho an'ny fametrahana ara-potoana dia manana fifandraisana tsy miova, miverimberina miaraka amin'ireo mpihaino, izay mifanaraka amin'ny fampitaovana mahomby...
Priva LED grille fampisehoana dia mihamalaza kokoa amin'ny fananganana jiro sy ny doka. Nahoana ny efitra lamba makarakara Outdoor maneho ny fanoloana ny jiro sy ny fitaovana ahoana avy no fantatrao momba ny LED Stip lamba fampisehoana, LED Grid lamba na LED Kisary grille ? Araka ny asehon'ilay anarana dia...
Mesh Curtain LED aseho: LED Video Media Facades Fampitana ny jiro fampidirana sy ny dokambarotra media Ao amin'ny tanàna maoderina, ny ankamaroan'ny trano dia mitrandraka ny soatoavin'ny vola doka ambony kokoa. Ny haino aman-jery Video LED maneho endrika ivelany isehoan'ny no safidy tsara izay mety...
Fampahalalana iraisan'ny hazavana sy haino aman-jery --- LED Video Media Facades Fampahalalana ivelany ivelan'ny Led Led gille dia teknolojia toy izany, ny tsipika ivelany ivelan'ny Led grille maneso ny olona ary manolotra azy ireo fialamboly, fahafinaretana sy fampahalalana. Fampisehoana Mesh Outdoor Led...
Shina Fampisehoana savoka LED ivelany mpamatsy
Endri-javatra manokana amin'ny Fampisehoana LED Grille Curtain
Inona no atao hoe lamba fantsona LED Display Screen? grille makarakara LED Fampisehoana efijery dia misy singa maromaro tokana mitarika. Izy io dia efijery LED izay toa grille ary lasa malaza kokoa eo amin'ny indostrian'ny LED. Azo antsoina hoe toy ny efijery Led Led. Koa satria mampiseho antsika ho vokatr'izany fahitana meshy ivelany izany, noho izany, ireo manam-pahaizana amin'ny fampisehoana LED dia miantso azy io ho efijery LED. Ity karazana efijery fahita any ivelany ity dia mihatra amin'ny rindrina ivelany, rindrina fitaratra, tampon'ny tranobe, doka tsanganana ary nitarika Curtain sy ny sisa.
Famolavolana lakroa vita amin'ny makiazy grille LED dia manapaka ny famerana ny fampisehoana LED nentim-paharazana ho an'ny trano sy rindrina, mahatonga ny tetik'asa fivoriambe ho mora sy voafantina. Angamba izany no antony mahatonga azy io ho azo ampiasaina manerana ny saha. Aoka `S CATA tonian-dahatsoratra mampiditra ny sasany tombony ara-teknika sy ny fomba mahatonga ny efijery nitondra tetikasa mora kokoa.
Grille varavarankely LED Screen lafiny ara-teknika weight Mavesatra lanja sy fanoherana ny rivotra
Grille varavarankely LED Screen lafiny teknika ❷ Ny fahombiazan'ny angovo matanjaka sy ny fanjifana ambany
Grille varavarankely LED Screen lafiny teknika ❸ Ny famolavolana avo dia ilaina
Grille varavarankely LED Screen lafiny teknika ❹ IP67 fiarovana ambaratonga
Grille varavarankely LED Screen lafiny ara-teknika ❺ mora fivoriambe sy fikojakojana
Ny efijery fanamainty lehibe
Fampisehoana Led Curtain Custom